Ukuphenya Ibha Yolwazi Lombhali yeWordPress
NgoLwesibili, Januwari 18, 2011 NgeSonto, uJanuwari 19, 2014 Douglas Karr
Ingxenye yokuphindiselwa kwethu kabusha ibiqhamuka nesici esiyingqayizivele ngokukhethekile se- Martech Zone. Yize ngibiza le sayithi ibhulogi yami, Ngifuna ngempela ukuthi ibhulogi ibe iqoqo lemibono evela kwabanye ochwepheshe abakule mboni. Ngezinye izikhathi, angivumelani nalokhu okubhalwe lapha… kodwa ngiyalisekela iqiniso lokuthi sonke sinemibono eyehlukene ngomkhakha. Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi abafundi bavezwe emibonweni ehlukene futhi. Futhi-ke ngikhuthaza wonke umuntu ukuthi kwenze kumazwana abekiwe!
Noma kunjalo, ngihlala njalo ngifuna izindlela zokukhuthaza abanye abablogi ukuthi banikele. Omunye wemibono uphumelele namuhla. UStephen Coley, of DK New Media (i-ejensi yethu), ishicilele i-beta yokuqala ye-plugin ye-Awesome Aitors!
Uma uskrolela ezansi kwekhasi lethu, ungagudla igundane kunoma imuphi wababhali ukubona ama-bios abo, izixhumanisi kokuthunyelwe kwabo kwakamuva kwebhulogi, kanye nesixhumanisi ekhasini labo lasekhaya. Ungapheqa kubo bonke ababhali ngokusebenzisa imicibisholo yesobunxele nakwesokudla. I-plugin yakhiwe nge-jQuery ne-Ajax (i-WordPress ehambisanayo), ngakho-ke ayilayishi yonke idatha yombhali futhi yehlise umthwalo wekhasi.
Sifuna ukukhulisa i-plugin bese sengeza ezinye izici ezingeziwe kanye nekhasi lokuphatha eliqinile. Vele, uStephen usebenza kulokhu phakathi kokuzibophezela kwamakhasimende ngakho kwesinye isikhathi kuthatha isikhathi eside kunalokho ebengingathanda! Kepha wenza umsebenzi omkhulu futhi i-plugin ibukeka mihle!
Iselula Ungabizi Ukubhaliswa Kuseduze
Jan 23, 2011 ngo-10: 45 PM
Ngiyayithanda! Futhi ngiyasithanda isithombe sokubuka kuqala osikhethile. 🙂
Manje usungigqugquzele ukuthi nginikele ngokuthunyelwe okuningi ku-The Marketing Tech Blog!